Shina: Simban’ny Fitrandrahana Arin-Tany Ny Sahan’i Hulunbuir · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2012 10:36 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Aymara, Español, Italiano, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
Ao avaratra atsinanan'i Mongolia Afovoany no misy ny Saha maitson'i Hulunbuir, mampiseho ny hakanton'ny tontolon'ny saha malalaka, ny ala, ny renirano sy ny farihy izay hiandrasan'ny mpiandry ondry Mongola ny andiam-biby fiompy aman'ondriny izy.Toerana fizahan-tany malaza ihany koa izy io. Nefa, noho ny fisian'ny fitrandrahana arin-tany manakaiky io faritra io dia voakaoka haingana ilay saha maitso.
Ny fahasimbàn'ny Saha maitson'i Hulunbuir
Ny 12 Septambra, 2012, Baoyi, mpiserasera amin'ny bilaogy madinika any Shangai dia nandefa [zh] sary vitsivitsy tamin'ny Weibo-ny ary nampitandrina ny hafa :
Voafafa matetika ity lahatsoratra ity, miangavy ny fanampianao amin'ny fanaparitahana azy ity haingana.Iray amin'ireo saha maitso malaza eran-tany ny saha maitson'i Hulunbuir. Misy karazam-bozaka maherin'ny 120 ao amin'io ampahan-tany io, toy ny bozaka maitso, ny varim-bazaha, alfalfa ary bozaka manindrona .Izany no hiantsoana azy hoe : “fanjakàn'ny mpiandry ondry”.Toerana fandehanan'ny mpizaha tany ihany koa any amin'ny fahavaratra, rehefa te-hahita ny lanitra manga,ny kianja maitso, ary ireo soavalin'ireo mpiandry ondry mikarenjy amin'ny tany malalaka ianao. Saingy ny orinasa fitrandrahana arin-tany no nandrava ireo zavatra rehetra teo ireo.
Hulunbuir Grassland simban'ny asa fitrandrahana arin-tany. Sary avy amin'ny Baoyi tamin'ny Weibo.
Zhai Ming Lei,bilaogera malaza dia nandray anjara [zh] tamin'ny ady hevitra :
Tena zava-doza io. Ny Saha maitson'i Hulunbuir dia iray amin'ireo saha anankiroa sisa tavela any Mongolia Afovoany (Xilin Gol ny iray). Tena voaaro tsara izy io [teo aloha]. Iza no nanapa-kevitra hampitrandraka arin-tany ao ? Fanapahan-kevitra adaladala. Nahoana ny fanjakana no tsy miraharaha io saha maitso saro-bidy io nefa mandany hery amin'ny nosy kely [alaina ohatra ny tsy fifanarahana amin'ny nosy Diaoyu ].
Zhai dia nanazava [zh] zava-misy ara-tontolo iainana amin'ny saha :
Nahoana no tsy tokony hadiantsika ny saha ? Ny sosona mandrakotra ny tany dia tena manify, eo ho eo amin'ny 50 sm eo ho eo. Ambanin'io dia ny soso-pasika avy amin'ny ranomasina taloha. Izany no mahatonga ilay saha ho mora tototry ny fasika. Tokony ho laniantsika amin'ny fiarovana azy ity ny herintsika rehetra. Hanafaingana ny maha-tany efitra sy ny tadiom-pasika ny asa fitrandrahana ankehitriny. Maty daholo ve ny solon-tenam-panjakana ? Nahoana no tsy misy mandray andraikitra amin'izany ?
Tsy mbola nihady ny taniny izany ny Mongola hatry ny fahagola. Tsy mbola nihady na dia lava-drano hatsakana aza izy ireo.Tahaka ny reniny no fijerin'izy ireo ny tany ary tahaka ny rainy ny lanitra ary tsy mbola nihady ny taniny izy ireo.Tsy mbola nihinana na dia fakan-java-maniry aza ry zareo. Tsy fanimbàna ny tontolon'ny zava-boahary ihany ny asa fitrandrahana, fa fandrobàna ny kolontsaina ihany koa.(Raha jerena ny tantara, dia tamin'ny adin'ny Shinoa sy ny Japoney no niandohan'ny lava-drano rehefa nanafika an'i Mandchourie ny miaramila Japoney ka natahotra fa nopoizinin'ny miaramila Shinoa ny farihy. Ankehitriny dia tena ratsy ny noho ny tamin'ny ady ny zava-miseho) Atsaharo ny fanimbàna ny saha maitso!